समाचार – Education Journalists Group
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम रहेको धनुषा जिल्ला राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा आगाडि रहे पनि शैक्षिक रुपमा भने पछाडि रहेको छ । एकातर्फ विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको विद्यालय छोडने प्रवृत्ति बढी छ भने अर्काेतर्फ शिक्षक व्यवस्थापन नहुंदा धनुषाको शैक्षिक सुधारमा चुनौति रहेको देखिन्छ । विद्यार्थीले विचमै विद्यालय छोडने प्रवृत्ति, नक्कली शिक्षक, कक्षामा शिक्षकको नियमितता नहुनु, र भएका शिक्षकको पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु वीचको संक्रमणकालिन अवस्थामा धनुषाको शैक्षिक अवस्था कमजोर बनिरहेको छ । धनुषाको साक्षरता प्रतिशतलाई हेर्दा अहिले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार भने धनुषामा साक्षरता प्रतिशत ५० दशमलव ७ रहेको छ । जसमा पुरुषको ६० दशमलव ...
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा वालवालिकाको प्रयोग हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन । विगतका चुनावमा समेत वालवालिकाको प्रयोग भएको भन्दै कार्यलाई रोक्न नवलपरासिका वाल अधिकारका क्षेत्रमा आवद्ध संस्थाले शिक्षा पत्रकार समुहका सदस्य तिर्थराज भुसालको संयोजकत्वमा कावासोतिमा रहेको ईलाका प्रशाशन कार्यालय,नवलपरासीमा मा ध्यानाकर्षण ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । निर्वाचन आचार संहितामा वालवालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसार ,आमसभा तथा जुलुसमा वालवालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने लगाएत किटान गरिएकाले उक्त दफालाई कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज समेत प्रतिबद्धता गरेको र यस्ता कार्यलाई रोक्नका लागि इलाका प्रसाशनबाट सुझाव र अनुगमनका आशा गर्दछौ जापन पत्रमा उल्लेख छ । साथै ज्ञापन पत्रमा मतदान केन्द्रलाई अपागङगमैत्रि वनाउन , विधालयका ...
विद्यालय शान्ति क्षेत्र सिद्धान्तले पुग्दैन कार्यान्वयन होस्
विद्यालय शान्ति क्षेत्र, राजनीतिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका चुनौती विषयमा आज राजधानीमा सरोकारवाला विच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । शिक्षा पत्रकार समुह र बालबालिका शान्तिक्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको संयुक्त आयोजना तथा विश्व शिक्षा कार्यक्रमको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा पुर्व शिक्षा मन्त्री, शिक्षाविद, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बाल अधिकारर्मी, विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेता, शिक्षासंग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा शिक्षा पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागिहरुले सरकारले २०६८ सालमै विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका जारी गरिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा कहांकहां, कोबाट कसरी बाधा र अवरोध आयो अनि देखिएका अबरोध र चुनौतिको अन्त्य गरी विद्यालय क्षेत्रलाई ...
Content Analysis Daily News Papers
Content Analysis यस अध्ययनको अवधिमा राजधानीबाट प्रकाशित हुने ठूला आकारका राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, राजधानी, नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण पोस्ट र द हिमालयन टाइम्सको शिक्षाको अन्तर्बस्तु विश्लेषण गरिएको छ । बैशाख÷जेठ महिना शैक्षिक हिसावले धेरै समाचार उत्पादन हुने समयका रुपमा लिइन्छ । नयाँ वर्ष आगमनसँगै विद्यालयमा विद्यार्थीको स्वागत तथा भर्ना अभियान, विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन सके नसकेको जस्ता विषय धेरै समाचार बन्ने विषय हुन् । लामो समयपछि शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन यसै अवधिमा भएकोले शिक्षाको समाचार कभरेज उल्लेख्य नै रह्यो । यस अवधिमा दैनिकहरुले राजधानी बाहिरका गतिविधिको समाचारलाई मुख्य प्राथमिकताका छापेको अध्ययनको क्रममा पाइएको छ । साथै प्रायजसो घटनामा ...
महिनावारीको बेला छात्रालाई काउन्सेलिङ्ग गर्नुको साटो घर पठाईन्छ
जनकपुरको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा केही दिन पहिला गएको थिए । विद्यालयको प्रधानध्यापक साग कुराकानी गरिरहेकै बेला झ्यालबाट विद्यार्थीहरुको एउटा झुण्ड जम्मा भएको देखे । प्रधानाध्यापक पनि चिन्तित हुदै त्यो झुण्ड केको हो शिक्षकहरुसाग सोध्न थाले केही मिनेट पछि थाहा पाए एक जना छात्रालाइ महिनाबारी भएपछि उ रुन थालेकी थिइन् । किन रोएको भन्दै त्यहाा भीड भएको थियो । आश्चर्य मलाई त्यो बेला लाग्यो जब ती छात्रालाइ समान्य सम्झाई बुझाई घर पठाईयो । ऊ रुदै घर गएकी थिईन । त्यही विद्यालयका अर्का छात्रा रिना -नाउ परिवर्तन) को पनि यो भन्दा फरक स्थिति थिएन । दूई साता पहिला मात्रै रिनालाई पनि विद्यालयमै एक घण्टा जति तनावमा बिताउनु परेको थियो । रिनाको पिता अम्बुज साहले छोरी विद्यालयमा रोईरहेको खबर पाएपछि विद्यालयबाट घर ल्याएका थिए । हामीसाग कुराकानी गर्दै अम्बुजले भन्नुभयो साथीहरुको बीचमा छोरी त्यत्तिकै रोईरहदा पनि विद्यालय प्रशासन पूर्ण रुपले अनभिज्ञ थिए । ...
भर्ना अभियान विवाद : शिक्षकले अभिभावकलाई दोष दिन मिल्छ ?
विष्णु विवेक । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरुदेखि नै विद्यालय बाहिर रहेका ६ लाख बढी विद्यार्थीलाई भित्र्याउने लक्ष्य लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पुरानै ढर्राको अभियान चलाइरहेको छ । विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन भर्ना हुने विद्यार्थीलाई स्वागत कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणदेखि घरदैलोसम्मका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर विद्यार्थी विद्यालयसम्म नआउनु तथा भर्ना भएका विद्यार्थी पनि विद्यालयमा नटिक्नुको दोष शिक्षकले अभिभावकलाई र अभिभावकले शिक्षकलाई लगाउँदै आएकामा शिक्षा सरोकारवालाहरुबीच नै विवाद देखिएको छ । मन्त्रालय र शिक्षा विभागको नेतृत्वमा हरेक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ५० हजार रकम बुझेर घर घरै पुगेर विद्यार्थी फकाउन लागिपर्दा सुगमका धेरैजसो विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो रोजाई महंगो ‘बोर्डिङ’ स्कुल ...
चैत्र १६, २०७२- भूकम्पको मारमा परेका विद्यार्थी अस्थायी टहराबाटै एसएलसीको तयारीमा छन् । काभ्रे दाप्चा माविबाट सामेल परीक्षा तयारी गरिरहेका दीपक श्रेष्ठ तीमध्येका हुन्, जो अस्थायी टहरामा स्थायी भविष्य खोजिरहेका छन् । योग्यता परीक्षामा ७७ दशमलव २५ प्रतिशत ल्याएका उनी विशिष्ठ श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने आशामा छ, सोचेअनुरूपको तयारी भने गर्न पाएका छैनन् । जिल्लाका १० हजार एक सय २५ विद्यार्थी अस्थायी टहरामा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् । पूर्ण पढाइ नहुनु, टहरामा पढ्ने वातावरण नहुनु र परीक्षाकेन्द्र समेत टाढा भएकाले यो वर्ष परीक्षार्थीलाई कठिनाइ छ । ‘असहजताबीच पनि सहज बनाउने प्रयासमा छौं,’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेलले भने, ‘नतिजामा असर पर्ने ...
साढे ५ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर
वैशाख २, २०७३- सरकारले १२ वर्षदेखि भर्ना अभियान चलाउँदै आए पनि अझै साढे ५ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । यसवर्ष पनि सरकारले ‘हामी सबैको इच्छा, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षा’ भन्ने नारा दिएर बिहीबारदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैछ । विज्ञहरूका अनुसार हरेक वर्ष तामझामका साथ गरिने सरकारी भर्ना अभियानले सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा तान्न सकेको छैन । शिक्षा विभागका अनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका ५ लाख ५१ हजार ५ सय ४२ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । तिनमा प्राथमिक तह अध्ययन गर्ने उमेर समूहका मात्रै १ लाख ६ हजार तीन सय ७ बालबालिका छन् । रौतहटमा सबभन्दा ...
राजधानीमै छैनन् पाठ्यपुस्तक, पुस्तक अभावका कारण विद्यालय खुलेनन्
काठमाडौँ, ९ बैशाख । शिक्षा मन्त्रालयले मुलुकभर राष्ट्रिय पाठ्यपुस्तक अभियान सञ्चालन गरिरहँदा राजधानीकै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले भने पुस्तक अभावका कारण पढ्न पाएका छैनन् । मन्त्रालयले वैशाख ५ गते राष्ट्रिय पाठ्यपुस्तक अदिवस मनाएर मुलुकभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । राजधानीकै कतिपय विद्यालय पुस्तक अभावमा खुल्न सकेका छैनन् भने खुलेका विद्यालयले पनि पढाइ सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । पाठ्यपुस्तक नपाएकै कारण थानकोटस्थित मंगलोदय मावि खुल्न सकेको छैन । पूस्तक खरिदका लागिड स्थानीय विक्रेतालाई चैतमै पैसा बुझाइसकिए पनि अझै पुस्तक हातमा नपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लीलानाथ शर्माले बताए । (अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा प्रकाशित)...